Xinhua Myanmar - ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် လာအိုနိုင်ငံက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ကုန်စည်တင်ပို့မှုမှ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံရရှိခဲ့
လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ သမ္မတနန်းတော်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
ဗီယင်ကျန်း ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကုန်သွယ်ရေး ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိနေလင့်ကစား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် လာအိုနိုင်ငံ၏ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ကုန်စည်တင်ပို့မှုတန်ဖိုးသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ထိ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ အဓိက တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ရသည့် ကုန်စည်များမှာ သောက်ရေသန့် ၊ သတ္တုများ ၊ သစ်အချောထည်များ နှင့် ရော်ဘာ ၊ ကော်ဖီ ၊ ပြောင်း ၊ ပီလောပီနံ ၊ ဆန် နှင့် ကျွဲနွားအပါအဝင် လယ်ယာထွက်ကုန်များ ပါဝင်ကြောင်း လာအိုနိုင်ငံ စက်မှု နှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဒေသတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် ထိခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း လာအိုနိုင်ငံ နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးတန်ဖိုးသည် ယခုနှစ်တွင် ဆက်လက်မြင့်တက်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် ထွက်ရှိသည့် လာအိုနိုင်ငံထုတ် Vientiane Times နေ့စဉ် သတင်းစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် ထိုင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံပြီးလျင် လာအိုနိုင်ငံ၏ တတိယမြောက်အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ထို့ပြင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ကာလအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၂ ဘီလီယံနှင့်အတူ လာအိုနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဗီယက်နမ်သည် လာအိုနိုင်ငံ၌ အသစ်နှင့်လုပ်ကိုင်ဆဲ စီမံကိန်း ၉ ခုအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမတည်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၄၃ သန်းရှိခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၁၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် နှင့် လာမည့် ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံသည် အထူးသဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး ၊ အခြေခံအဆောက်အဦ ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍများအပါအဝင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီထားကြောင်း ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပူးတွဲစီမံကိန်းများအတွက် နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များထံမှ ငွေးကြေးမတည်ရင်းနှီးမှုများရရှိရန် ရှာဖွေလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် လာအိုနိုင်ငံသည် သွင်းကုန်တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅,၃၆၆ သန်းနှင့် ပို့ကုန်တန်ဖိုး စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆,၁၀၁ သန်းနှင့်အတူ ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေ ဒေါ်လာ ၇၃၅ သန်းရရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။(Xinhua)
Laos earns 1 bln USD from goods export to Vietnam in 2020
VIENTIANE, Feb. 17 (Xinhua) -- The value of goods exported from Laos to Vietnam was recorded at one billion U.S. dollars in 2020 despite trade disruption due to the COVID-19 pandemic.
The main items sold to Vietnam were drinking water, minerals and wood products, and agricultural products such as rubber, coffee, maize, cassava, rice and cattle, according to the Lao Ministry of Industry and Commerce.
The value of trade between Laos and Vietnam is expected to rise further this year, although trade is at risk of continued disruption if there are further outbreaks of the virus in the region, local daily Vientiane Times reported on Wednesday.
Vietnam is Laos' third largest trading partner after Thailand and China.
Vietnam was Laos' third largest investor in the period 2016-2020 with registered capital of 4.2 billion U.S. dollars, an increase of 35 percent compared to 2010.
In 2020, Vietnam sawabreakthrough in its investment activities in Laos with total registered investment capital of 143 million U.S. dollars, including nine new and existing projects, representing an increase of 130 percent year-on-year.
As part of the cooperation strategy for 2021 and the next 10-year period, the two countries have agreed to further boost economic cooperation, especially in trade, infrastructure and telecommunications, while seeking financing from international partners for joint projects.
In 2020, Laos hadatrade surplus of 735 million U.S. dollars, with imports valued at 5,366 million U.S. dollars and the value of exports totaling 6,101 million U.S. dollars, according to the report. Enditem
(1)The Presidential Palace is decorated with flags in Vientiane, capital of Laos, Jan. 8, 2021.
(2)The street is decorated with lights, slogans and flags in front of the Presidential Palace in Vientiane, capital of Laos, Jan. 8, 2021.
Previous Article မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်(ဟောင်း)နာဂျစ်၏ ဇနီးအား အဂတိလိုက်စားမှုစွဲချက်များအပေါ် ခုခံချေပရန် အမိန့်ချ
Next Article အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ တူးမြောင်းထဲ ဘတ်စ်ကားထိုးကျမှုတွင် သေဆုံးသူ ၅၀ ဦးထိမြင့်တက်